Maty ve ny endrika mitarika? | Martech Zone
Valiny fohy? Yep.
Farafaharatsiny amin'ny heviny nentim-paharazana, ary amin'ny "nentin-drazana" dia midika hoe mitaky ny mombamomba ny mpitsidika alohan'ny nanomezanao lanja, na ny fampiasana ny votoaty tsy misy dikany ho famporisihana anao.
Andao averintsika amin'ny lamina vitsivitsy io kamio io:
Ao amin'ny asanay manampy ny mpanjifa hampitombo ny fiovam-pon'izy ireo an-tserasera, dia nahatsikaritra ny fidinan'ny mpitsidika tranonkala tsy an-kijanona mameno ny endrika firaka nentim-paharazana izahay. Misy antony matoa izany.
Miova ny fihetsiky ny mpividy, indrindra satria ny teknolojia, fampahalalana ary fifandraisana mifandray amin'izy ireo dia mivoatra sy mamerina manova ny toetrany.
Vokatr'izany, ny mpividy anao dia nitombo fahalalana bebe kokoa, mahay manavaka, mitaky, ary variana. Amin'ny ankapobeny, izy ireo tsy misy dikany tanteraka amin'ny atiny miovaova izay matetika tsy mahita ny marika amin'ny famantsihana ny filan'izy ireo, ny zavatra mahaliana azy, na ny toerana misy azy ireo amin'ny dia mividy.
Ny atiny vita amin'ny vavahady izay niasa tsara tsy ela akory izay (mijery anao izahay, taratasy fotsy sy ebooks) dia famporisihana mahatsiravina ankehitriny hahazoana vaovao momba ny fifandraisan'ny olona iray.
Raha ianao hevero ho toy ny a ny tranonkalanao mpivarotra nomerika (araka ny tokony ho izy), ny atiny mihetsiketsika voafafy tarehimarika firaka dia mitovy amin'ny solo-mpivarotra izay mamaky ny resaka, toa rakipeo firaketana, ary manome ilay feo marenina tahaka izany ihany amin'ny fanantenana rehetra miampita ny lalany. Ampitahao amin'ny rep mpivarotra izay mametraka fanontaniana, mihaino ary manome valiny mahasoa. Olona tsy mahatadidy fa mpivarotra manery tena, fa mpanolotsaina azo itokisana ary mahay miresaka. Izay no azon'ny atiny ifanakalozana atolotra.
Tena miasa ve ny fifandraisana?
Diniho ireto valiny ireto:
Ny atiny ifanakalozana dia miteraka fiovam-po 94% bebe kokoa Source
Ny atiny ifanakalozan-kevitra dia miteraka fifanakalozana mpanjifa 300% avo kokoa Source
Ny atiny ifanakalozana dia miteraka fitehirizana vaovao 60% ambony. Source
Ny atiny ifanakalozana dia miteraka angon-drakitra 500% fanampiny voaangona. Source
Antony roa tianay hamafisina:
Ny fampahalalana izay namboarina ho an'ny tombontsoako ary aiza aho eo am-panaovana ny fividianana dia hiova hatrany ny atiny "catch-all" natao hampifaliana ny olona rehetra, na aiza na aiza. (Fantatsika rehetra fa mahomby ny fiezahana hampifaly ny rehetra. Tsy.)
Milaza amintsika ny Neuros Scientists momba ny “ati-doha mandady"(Anaram-bosotra ho an'ny ampahany amin'ny atidoha mitondra fihetsika tsy mahatsiaro tena ary ny teny farany amin'ny fanapahan-kevitra) maso, ary ny atiny tsy misy fanentanana hita maso dia tsy dia mandaitra loatra.
Anecographe kely hanohanana an'ity teboka farany ity: Nisy mpanjifa nandinika infografika iray tamina taratasy fotsy iray, ary nipetraka tao ambadiky ny firaketana izahay. Nahazo fiovam-po zero ny taratasy fotsy, raha 100% kosa ny fandefasana sary. Te handray andraikitra ve izany ati-doha mandady izany? Ataovy mahaliana ny votoatinao, ho an'i Pete.
Ny raharaha fanarian-dàlana amin'ny làlan'ny fiovam-po efa tonta dia tsy famonoana endrika tanteraka, fa mitaona ny mpanjifa hanaraka traikefa ifanakalozana izany dia manangana fahatokisana ary manome lanja alohan'ny anontanianao azy ireo amin'ny fanoloran-tena lehibe kokoa toy ny fizarana ny mombamomba ny fifandraisana. (Tahaka ny fitondran-tenanao amin'ny daty iray raha maniry hanana daty faharoa ianao.)
Inona no karazana atiny fifandraisana afaka manao izany?
Ohatra amin'ny atiny fifandraisana ahitana:
Mpandrindra fanendrena - Asao ireo manantena hizaha toetra sy tombontsoa amin'ny alàlan'ny fametrahana fotoana
fanombanana - Zahao amin'ny filanao manokana ary omeo tolo-kevitra mahasoa
kajy, - Ampio ny mpividy handanjalanja ny sandany
Chat - 1: 1, fanampiana ara-potoana toy ny mpanjifa manombana ny fividianana
Làlana / Promo manokana - Fitaovana manokana, tolo-kevitra na promo mifototra amin'ny safidin'ny mpividy, ny tantara na ny fividianan'ny namana
Fanamarinana eo noho eo - Esory ny sakana amin'ny fividianana amin'ny fanazavana mazava raha afaka mividy izao izy ireo
Instant Win - Atambaro ny te hahafanta-javatra ny fandrisihana
Infografika iraisana - Infografika misy singa mifandraika toy ny mihetsika sy singa ilana fangatahana toy ny takelaka fampahalalana na horonan-tsary
Aloavy amin'ny bitsika / fizarana ara-tsosialy - Omeo valisoa ireo mpitsidika rehefa mizara ny atiny amin'ny tamba-jotra sosialy ry zareo
Quizzes - Avelao ny mpitsidika hitsapa sy haneho ny fahalalany
Tantara mikraosita - Mikraosita an-tserasera izay mitsidika mpitsidika amin'ny alàlan'ny pejy sy horonan-tsary mankany amin'ny fiovam-po
Trivia - Omeo fahafaham-po ny fahalianany ary asehoy ny zavatra fantany
Video - Asehoy vs. lazao
Rehefa manomana ny atiny ifandraisana ianao dia manampy ny mitadidy ao an-tsaina mpamily saina izany ny hetsiky ny mpitsidika sy ny fanjifana votoaty. Ireto ambany ireto dia mitanisa vitsivitsy, indramina amin'ny namantsika ao amin'ny Maty ireo endrika firaka:
Mbola manjavozavo amin'ny mety ho endrik'ity hetsika ity? Ity a mora raisina mpitari-dalana, izay azonao atao "mandoa amin'ny bitsika" mba hahafahanao mahazo ny làlan'ny làlana iraisana iraisana iraisana iraisana.
Zahao ny Torolàlana momba ny fifandraisana
Alohan'ny hisarahantsika lalana dia te hanaiky aho ary hanome dimy ambony virtoaly amin'ireo mpanjifanay ary mpiara-miasa atiny fifandraisana—Muhammad Yasin sy Felicia Savage ao amin'ny PERQ. Ny ekipan'izy ireo dia namolavola rindranasa votoaty mahafinaritra sy mifanakalo hevitra hamadika ny tranonkalanao ho mpivarotra dizitaly, izay tokony Zahao hoe sy ny demo, fanjakana.
Mangataha Demo misy lozisialy votoatin'ny fifandraisana
Inona avy ireo karazana atiny ifandraisana, raha misy, efa niainanao? Inona ny eritreritrao hatreto? Mizarà etsy ambany ary andao hifanampy isika.
Disclosure: PERQ dia mpanjifan'ny anay fahafahana misafidy.
Tags: Content Marketingatiny fifandraisanarindrambaiko votoaty mifandraykarazana atiny mifandraytraikefa ifaneraseranaendrika firakamaty ny endrika firakaPERQ